INDLELA YOKULAHLA I-PUFFY EYES KUNYE NEEBHEGI PHANTSI KWAMEHLO - UBUHLE OBUJONGIWE NGOKUTSHA
Ungasusa njani iiNgxowa zokukhukhumala phantsi kwamehlo akho
Ke, ekugqibeleni, uvale iiyure ezisibhozo zokulala-kodwa ingxelo yokuqala oyivayo emsebenzini ngentsasa elandelayo inokwenza wonke umntu acinge ngenye indlela: Ubonakala udiniwe.
Wonke umntu uyakhukhumala, iingxowa ezimnyama phantsi kwamehlo akhe kube kanye ngexeshana, kodwa wenza ntoni xa ujongeka udiniwe ngokungapheliyo? Nantsi yonke into ofuna ukuyifumana malunga nokuba kutheni amehlo akho edumba, kunye nendlela yokukhupha ngokukhawuleza.
Yintoni ebangela amehlo akhukhumeleyo? 👀
Ngamanye amaxesha, izangqa ezimnyama kunye namehlo akhukhumeleyo aphume kulawulo lwakho. Ukuba nokusasazeka kwendalo kwindawo ephantsi kwamehlo (enkosi, ufuzo!) Ivumela igazi kunye nolwelo ukuba ludibane ngokulula apho. Kodwa kukho imikhwa emininzi yemihla ngemihla kunye nezicaphukisayo ezinokuthi zenze ukuba loo ndawo ijongeke ngathi inomoya kunokuba ifuna ukuba njalo, kubandakanya:
Ukusela kakhulu utywala
Ukutya ityuwa egqithileyo
Iimeko zonyango ezisisiseko
Ukuba awubandezeleki ngamehlo okhukhumeleyo, jonga ukudumba ngokusondeleyo. Ukuba iza ngokuhambelana nobomvu okanye ukucaphuka, unokuba ujongene nokukrala, istye, okanye nosulelo olufana neliso elipinki. Ukuba uqaphela naluphi na utshintsho lombono okanye ukukhutshwa, nantso ke ingcinga yakho entloko kugqirha wamehlo ASAP .
Indlela yokulahla izangqa ezimnyama kunye namehlo akhukhumeleyo 👋
Ngelixa ungenako ukwenza lukhulu ukuba amehlo akho ayinto ekhukhumeleyo ngokwemvelo, kukho amanyathelo athile onokuwathatha ukuba, yithi, isosi eninzi yesosi kwi-sushi yakho ikwenza udumbe kusasa emva kwesidlo sakho, uyachaza uJamé Heskett , MD, umbhali we Indlela eyiyo . Zama ezi ngcebiso ukukhusela, ukulungisa, kunye nokukhusela amehlo akho aphantsi xa ufuna ukukhupha ngokukhawuleza.
Into yokuqala yokuqala: qiniseka ukuba uwotshi kwisuti eyaneleyo ubusuku ngabunye. Cwangcisa ubuncinci iiyure ezingama-7 ukuya kwezi-9 lala ubusuku ngabunye.
Indawo olala kuyo inokwenza umahluko, nayo. Qiniseka ukuba ulala kunye nentloko yakho iphakame ngaphezulu kwentliziyo yakho ukuthintela ukukhukhumala, kuba oku kuthintela ulwelo ekuhlaleni ebusweni bakho kwaye kugcina igazi lihamba ngokukhululeka kuwo wonke umzimba wakho njengoko ulele. Umqolo wakho ngowona ulungileyo, njengoko icala lakho kunye nesisu sithintela ukujikeleza, utshilo uGqirha Heskett. Zama enye yezinto esizikhethileyo Eyona miqamelo ilala kamnandi ukuba unobunzima bokungqengqa emqolo.
Coop Iimpahla zekhaya eziLungelelanisiweyo zeLoft Pillowamazon.com$ 59.99 THENGA NGOKU I-DMI Foam Ibhedi ye-Wedge Pillowamazon.com$ 18.68 THENGA NGOKU Ukulala Ubuchule obupholileyo beMemori ye-Foam Contouramazon.com THENGA NGOKU Imemori yokulala yeCr yokuLala iMilenzeamazon.com THENGA NGOKU
Sela ulwelo ngokwaneleyo
Qiniseka ukuba usele amanzi amaninzi kuyo yonke imihla yakho, ucebisa uGqirha Heskett. Xa u Ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni Umzimba wakho ubambelele kulwelo olunokubangela ukudumba. Ukuhambisa i-H2O kunokunceda nokugungxula ityuwa egqithileyo kwinkqubo yakho ( Intliziyo yakho iya kukubulela ngayo , nayo.) Inkqubo ye- IZiko lezoNyango licebisa Abasetyhini bathambisa ii-ounces ezingama-91 (okanye ii-2.7 iilitha) zolwelo ngokusebenzisa ulwelo kunye nokutya yonke imihla. Oko kubandakanya imveliso etyebileyo ngamanzi, njengeetamati, ivatala, kunye neekomkomere.
Ukuba ufuna uncedo ekuqinisekiseni ukuba usele amanzi amaninzi, zama le nto yokufaka ibhotile, ekuvumela ukuba ungcamle amanzi akho ngokwendalo. Omnye wabahleli bethu ufunga ngayo, kwaye uthi yeyona nto imncedileyo ukuhlangabezana neemfuno zakhe zokuhambisa amanzi.
Zama ukumisa ibrashi
Ukuba uvuka uziva ukhukhumele, ziphathe ngesithambiso sobuso esincinci ngaphambi kokuba ulungele usuku, ucebisa uGqirha Heskett.
Sebenzisa ibrashi eyomileyo imizuzu emithathu ukuzama ukuhambisa ulwelo ngaphandle kwendawo yakho engaphantsi kwamehlo. Ufuna ukusebenzisa enye eyenzelwe ubuso-hayi ibrashi yomzimba-njengoko ubungakanani obuncinci kunye neebristles ezithambileyo zilunge ngakumbi kulusu olubuthathaka olujikeleze amehlo akho. Oku iseti yokuxubha eyomileyo evela kwi-Belula Care iza nebrashi yobuso exfoliating. Sebenzisa ubumnene (ugxininiso kubumnene!) Ukunyuka okunyukayo. Unokuzama oku ngaphambi kokulala ukukhusela ulwelo ekuhlanganiseni ukuya kwamehlo akho angaphantsi.
Qengqa ubuso bakho
Sebenzisa i-jade roller-isixhobo esigcina ilitye le-jade kwaye sikhangeleka ngathi yiroller yokupeyinta encinci-inokukunika iziphumo ezifana nokuxubha okwomileyo. Yisongele phezulu nangaphandle ebusweni ngoxinzelelo lokuthambisa kwindawo leyo ekhuthaza umjelo we-lymphatic kunye nokunyusa ukujikeleza. Siyayithanda le ifumaneka kwiAmazon:
Izinto ezipholileyo phantsi
Emva kokuxubha, uya kufuna ukujolisa ekudumbeni okukhulu, utshilo uGqirha Heskett. Unyango lwesiNtu olunjengokubanda okubandayo, iisilayi zeekomkomere ezibandayo, kunye nokuntywila (kunye nokupholisa) i-chamomile teabags konke kuya kunceda ukunciphisa ukudumba ukugxotha ukukhukhumala. Unokugcina imaski yokupholisa efana nale ingezantsi egcinwe kwisikhenkcezisi sakho ukuze ulungise ngokukhawuleza nangokulula.
Khetha ijeli efanelekileyo
Iimveliso ezifakwe kwi-caffeine zisebenza ukunciphisa iingxowa zamehlo ngokunyanzela imithambo yakho yegazi, utshilo ugqirha wesikhumba oqinisekisiweyo IPurvisha Patel, MD, Umnini we-Advanced Dermatology & Associated Cancer Associates eTennessee naseMississippi.
Ezi zikhethi zine zithuthuzela, zikhanyise, kwaye ziphinde zinike ulusu amandla ngelixa kunciphisa ukudumba:
UBOMI BOBISI NGAMANZI Amanzi apholisayo THENGA NGOKU UGqr Brandt Iinaliti Azisekho Imithwalo Yamehlo Gel-Ukukhukhumeza Gelsephora.com THENGA NGOKU Ubuso be-Fuel yobuso bukaKiehl THENGA NGOKU Clinique Konke malunga namehlo eSerum yokuThoba ukukhukhumeza kwamehlo THENGA NGOKU
Dibanisa izinto phezulu
Ngamanye amaxesha unokubotshelelwa kwiingxowa kuba ulusu oluvulekileyo olujikeleze amehlo akho aphantsi kwamehlo lwenza izinto zibukeke zikhukhumele. Ukulungiswa? Jonga ukhilimu wamehlo nge-hyaluronic acid, isithako esibopha ngamanzi ukugcwalisa indawo kwaye sikhuthaze imveliso ye-elastin ukuba iqinise ngokuhamba kwexesha, utshilo uDermatologist waseManhattan UKenneth Mark, MD , Unjingalwazi oncedisayo weklinikhi e-NYU Langone. Ezine ezihambelana nomthetho osayilwayo:
NgoMgqibelo uLusu oluBanzi Vuka ukuqaqamba kweCream yamehlosephora.com THENGA NGOKU UPeter Thomas Roth Amanzi Amanzi Amanzi I-Hyaluronic Cloud Hydra-Gel Eye Patchessephora.com$ 55.00 THENGA NGOKU I-CeraVe I-Cream yokulungisa iliso $ 10.34 THENGA NGOKU UMario Badescu Hyaluronic Cream Eyeamazon.com THENGA NGOKU
Khusela ulusu lwakho
Ilanga alwenzi ulusu lwakho. Ukonakala kwemitha ye-UV kunye nokujongela phantsi i-collagen yakho yendalo kunye ne-elastin, okwenza ulusu kunye neebhegi ezikhululekileyo zibalasele. Vimba ezo ziphumo zokuguga ngescreen elangeni sobuso, njenge Elephants ($ 34, ISephora ). Yithambise kumqolo wamathambo phantsi kwamehlo akho kwaye unxibe iiglasi zelanga rhoqo ukuthintela iingxaki, utshilo uGqirha Heskett.
Indawo yaseShiseido yezeNdawo zaseDolophini ngaphandle kweoyile uMkhuseli we-UV SPF 42 THENGA NGOKU Isikhumba seMurad City Skin esibanzi seMinerali yeScreen SPF 50 THENGA NGOKU I-EltaMD UV yobuso obuBanzi be-Spectrum SPF 30+ THENGA NGOKU I-MDSolarScience yezeMbiwa zeCreme Spectrum SpF 50 THENGA NGOKU
333 intsingiselo yokomoya